Nhau - Log Multi-rip saw saw muchina
Iyo danda yakawanda - blade saha inoonekwa seine zvakanakira kudya kwakatsetseka, kugadzirwa kwakanaka, pasina unopisa jira reza, kushanda kwakanyanya, zvakaderera zvinoshandiswa, kuchengetedzeka uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza Iyi inoshanda, yepamusoro-chaiyo uye yekuchengetedza zviwanikwa huni huni tekinoroji. kutsvagisa uye michina yekutsvagisa uye chirongwa chekuvandudza, mushure memakore mazhinji evashandi vepamusha vehunyanzvi vakazvipira kutsvagisa nekusimudzira, chiitiko chepamusoro-soro nekodzero dzakazvimirira dzepfuma.
Imwe danda multi-chip saw inogona kutsiva ina echinyakare bhendi bhaji. Iyo michina inotora chimiro chitsva uye huwandu hwetekinoroji nyowani, uye zvigadzirwa zvehunyanzvi zvinosvika padanho repamberi repasi rose. Iyo midziyo inogona kutema matanda, hafu matanda uye mativi matanda mukati me20cm dhayamita. Yakanzi inoshanda, yakanyanya kunyatsoita, nekuti inogona kuve danda rekucheka mune dzinoverengeka dzakatemwa marongero ebhodhi, yakakwira degree of otomatiki. blade ukobvu 1.5 1.7 mm, ine yakajairika saw blade ichienzaniswa ne2,5 3.0 mm ukobvu, sawing saw mugwagwa kurasikirwa kupfuura mamwe muchina wekucheka wakadzikiswa ne46%, nekusiyana, iro chiyero chezvinhu chakakwira kusvika 76% kusvika 80%, matanda kushandiswa kwehuwandu hweanenge 27% yakakwira kupfuura iyo yemamwe marudzi emuchina wekucheka, uye yekucheka maitiro akatsiga, kucheka ndiro yeunifomu ukobvu, kumeso kwepamusoro, yunifomu kutsetseka kwakanyanya, zvakare kunogona kuderedza hafu yehuni pamusoro yekupedzisa maitiro.
Panguva imwecheteyo, nekuti mota yemagetsi yakazara, simba rekushandisa rechishandiso rakaderedzwa ne25% kusvika 40%.
Kune maviri makuru marudzi erogi multi - blade saws: yakatwasuka uye yakatwasuka. Ungasarudza sei danda rakawanda-blade saw?
Zvinoenderana neprofile iwe yaunoda kugadzirisa - kana iri yepakati kutora chikwere, ive shuwa kusarudza yakatwasuka danda rema-blade saw, nekuti iro reza reza yakatwasuka matanda ekucheka matanda, saka zvisinei nehukuru hwehupamhi log inogona kutorwa mukati.Kana iri yekuvhura matanda ese, iwe unogona kusarudza yakatwasuka rogi multi-slice saw, nekuti jeko resaha rakacheka matanda akatwasuka, anogona kutemwa.
1. Inonyanya kushandiswa pakucheka kwenguva refu kwematanda madiki epakati. Zvinoenderana nesaizi yakatarwa, mahwendefa mazhinji anogona kuchekwa pane imwe feed.
2.Kuchienzaniswa nebhendi bhaundi, iko kushanda kwemuchina kwakakwirira, iko iko kuita kwakakwenenzverwa, iko kushanda kuri nyore uye kuri nyore, uye hunyanzvi zvinodiwa kune vanoshanda hazvisi zvakakwirira, izvo zvinoumba zvikanganiso zvechikwata akaona machining kururamisa iri pasi, iko kushanda kwakaderera, iko kushanda kwehunyanzvi zvinodiwa kwakakwira.
3. Saha reza inoshongedzerwa nechinotonhora mudziyo, izvo zvisiri nyore kupisa jeko resaha uye inowedzera hupenyu hwebasa rezai reza.
4. Mutsara wakapetwa weakasimba meno cheni kudyisa, nyore kugadzirisa uye hupfumi.
5. Mugumo unoburitsa une unoshanda wekudyisa mutungamiriri mudziyo, izvo zvisiri nyore kusungisa jeko resaha uye inovandudza kutsetseka kwekudyisa.
6. Iyo yekumberi uye yekumashure giredhi njanji uye yekudyisa giredhi njanji yebhokisi re spindle inopihwa nemafuta neyakagadziriswa lubrication pombi, iyo inowedzera hupenyu hwesevhisi yeinotungamira njanji.
1. Kudzora nekutarisa iyo yekudyisa cheni, yekudyisa mota cheni uye yekufambisa mota mukati meiyo log yakawanda-chip saw yakagara.
2. Nguva dzose tarisa kana kureba kwebhanhire uye kuomarara kwemota huru zviri pakati nepakati, iyo kapu yemafuta yebhokisi inofanira kugara ichizadzwa nemafuta, uye kuti pombi yemafuta yave zvakanaka madoko.
3. Iyo yekuvhara padhi, saw blade uye yekufambisa blade mune yakawanda-blade saw inofanirwa kucheneswa nguva dzose (3 ~ 5 mazuva) nemafuta edhiziri, uye kucheneswa nemucheka wakachena. Iko hakufanirwe kuve nesundries panguva yekuisirwa, uyezve ndokucheneswa nejira.
4. Musimboti wekurukisa unofanirwa kushandiswa kukwesha gomba nemvura kamwe pazuva kana kutsiva danda rakawanda-chip saha, kana kuridza pfuti yemhepo panzvimbo yekunze kuti ubudise ivhu uye uone kuti chiteshi chacho chakatsetseka.
5. Gara uchitarisa kana chokurukisa nati mukati meganda mizhinji-slice yakaona muchina yakasununguka.
Wooden Chishandiso Cabinet, Woodworking Turu Kanzuru Zvirongwa, Cnc Mashini Maturu, Cnc Bits, Cnc router mabhatani, Robin Wood Zvishandiso,